Your Story :: Nepal News, Nepali Samachar | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Thu, Jan 20, 2022 | 05:00:27 NST
सम्पन्न र सुखी जीवन सबैको चाहना हो । कोहीले यसलाई सपनामा मात्र सीमित राख्छन भने केहीले सुखी जीवनको आनन्द लिँदै अरुलाई पनि सुखी र खुसी बनाउन सक्षम हुन्छन । सम्पन्नता प्राप्त गर्नका लागि धेरै कुराले प्रभाव पार्दछ । ती धेरै कुराहरु मध्ये व्यक्तिको सोच र लगानीको शुरुवात पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसायिक लगानीको शुरुवात गर्नका लागि बचत, जोखिम र यसका आयामहरुलाई बुझ्ने क्षमताले सफलता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यस्ता सोचहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ । मानिसका खर्च गर्ने व...
एक महिलालाई कुटपिट भयो । घरबाट निकालियो । दुव्र्यवहार भयो । घरमा सम्मान पाइनन् भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? धेरैलाई लाग्न सक्छ महिला नै गलत हुन् । अझ अहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीले रमाइलो गरिन, दोस्रो बिहे गर्ने बढे भन्ने जस्ता अनेक समाचारका शिर्षक भेटिन्छन् । महिलाहरुकै कारणले समस्या निम्तियो, उनीहरु त्यस्तै हुन्छन् भन्ने सोच आज हैन समाजमा हिजैदेखिको हो । श्रीमान् परदेश गएपछी श्रीमतीलाइ हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइहाल्छ । जाने बुझेका मान्छेले नै फर...
मेरा चार जना छोराछोरी छन् । छोरी अहिले १० कक्षामा पढ्छिन् । तीन छोराले चाहिँ पढ्न भन्दा पनि कमाउन तिर ध्यान दिए । त्यसैले ऋण काढेर तीन जनालाई नै विदेश पठाएँ । छोरा मेरा तर उनीहरुले विदेशमा गरेकाे दु:खले साहु धनी भए । सय कडा तीनको ऋण तिर्दा तिर्दै छोराहरु फर्किने बेला भैहाल्ने । घर त जस्ताको तस्तै । विदेशको कमाइ खहरे खोलाको भेल जस्तै हुने रहेछ । केही समयअघि हाम्रो गाउँमा एउटा कक्षा हुने भयो । बुढेसकालमा हामीजस्तालाई पढाउने कक्षा कस्तो होला भन्ने लाग्यो सुरुमा सुन्दा त । छोराहरुलाई...
जुन हिसावले बंगालादेशी कामदारलाई मलेसियाका एजेन्सीले भर्ती गर्ने गरेको छन्, नयाँ सरकार त्यसको विरुद्धमा जान्छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको विगत हेर्ने हो भने यसो भन्न सकिन्छ । अनवर इब्राहिमलाई २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना धेरै छ । उनी जेलमुक्त पनि भइसकेका छन् । बंगलादेशी कामदार भर्ती गर्ने विपक्षमा अनवर पनि छन् । बंगलादेशी कामदारले मलेसियाको सामाजिक संरचनामा खलल पारेका उनीहरुले ठहर गरेका छन् । साथसाथै बायोमेट्रिक पनि खारेज हुने सम्भावना छ । निवर्तमा...
रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु दिनहुँ बढिरहेका छन् । २/४ वर्ष परिवारसँग टाढा भएर कमाउँला र सुखले बसौंला भन्ने सपना लिएर परदेशिने र उनीहरुका परिवारको अवस्था सधैं राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । टाढा हुँदा समान बुझाइ हुन नसक्नु, शंका उत्पन्न हुनु, भावना नबुझ्न नसक्नु, ऋण हुनु, सोचे जस्तो कमाइ नहुनु जस्ता विभिन्न कारण विदेशमा हुने र परिवारमा मानसिक समस्या हुन सक्छ । व्यक्तिमा हुने सोच, भावना र व्याबहारमा आउने नकारात्मक असर नै मनोसामाजिक समस्या हो । विषेश गरी वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान्, श्रीमती व...
अहिले म साउदीमा छु । कमाएर ल्याउछु भनेर घरबाट विदा त भएँ तर पराइदेश सोचेको जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ । विदेश आइयो । न यहाँ आफन्त छन् न त कुरा बुझिदिनेहरु । मनका कुरा कोसँग सुनाउनु । दिनरात नभनी काम गर्दाको थकाइ त छँदैछ । त्यसमाथि सुख दुःख साट्न नपाउँदा झनै गाह्रो हुने रहेछ । मेरो भोगाइ यस्तै छ । हिजोआज सञ्चारमाध्यमले टाढा हुनेलाई पनि नजिक त बनाएको छ । तर यस्ता माध्यम सधै पर्याप्त हुँदो रहेनछ । इन्टरनेटले अनुहार हेरिहेरी कुराकानी गर्न मिल्ने त भयो तर मेरो गाउँमा यस्तो कुरा सम्भव छैन् । घर...
रोजगारीका लागि विदेश पुगेका धेरैजसो नेपाली दाजुभाइ लेखपढ गर्न नजान्ने देखेँ । यही कारण विदेशमा नेपाली कामदार हेपिने रहेछन् । अनि सीप नजान्दा त झन धेरै हेपिनुपर्छ । धेरै नभएपनि अलि अलि अंग्रेजी लेख्न र बोल्न जान्नुपर्ने रहेछ । कति ठाउँमा नेपालीले नेपालीलाई नै हेपेको देखेको छु । म पनि धेरै त पढेलेखेको छैन । तर पनि अलि अलि पढेको अहिले काम लागेको छ । अस्ति एक जना नेपालीलाई भेटेँ । उहाँले भन्नुभयो, पैसा कमाउने लोभमा यहाँसम्म आइयो, लेख्न पढ्न पनि आउँदैन । त्यसमाथि काम पनि जानेको छैन । त्...
आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि म रोजगारीका लागि युएई गएको थिएँ । त्यसबेला मेरो उमेर १९ वर्ष थियो । घरमा आमाबाले विदेश नजाउ, पढ भन्दा पनि म धेरै र छिट्टै पैसा कमाउने सपना बोकेर युएई पुगेको हुँ । पैसा कमाएर बाआमालाई सुखसँग राख्ने रहर पनि थियो । जब म युएईको एयरपोर्टमा झरेँ, त्यसैबेला मेरा सपना चकनाचुर भएजस्तो लाग्यो । फर्केर नेपाल टेक्न पाउँदिन झैं मनमा लाग्यो । एयरपोर्ट बाहिर कम्पनीको मान्छे लिन आएका रहेछन् । म सहित सात जनालाई गाडीमा लिएर कम्पनीको अफिसमा लग्यो । पाँचतारे होटलमा खाना सर्भिस गर्...
चैत ९ गते सर्लाही जानुपर्ने थियो । सुमोमा फोन गरेर टिकटको बारेमा बुझें । सुमोका मान्छेले भने ‘सात नम्बर सिट मात्रै बाँकी छ ।’ सुमोमा त्यो पनि लास्टको सिट । नाक खुम्च्याउँदै हुन्छ राखिदिनुन भनें । नाम र नम्बर पनि दिएँ । भोलिका लागि त्यो सिट मेरै लागि भयो । ९ गते बिहान झोला बोकेर बल्खु पुगें । चोकमा ओर्लन नपाउँदै एकजना ब्यागै समात्न आइपुगे । कहाँ जाने हो ? यता सिट खाली छ । ‘सर्लाही जाने हो,’ मैले भनें । अलिक ठूलो ब्याग बोकेर हिँड्ने बित्तिकै सिट खाली छ भन्दै आएका ...
म अहिले ५० वर्षको भएँ । मेरो श्रीमान र श्रीमान पनि तीन छोरा अनि तीन छोरी छोरी छन् । एक छोरा र एक छोरी विदेशबाट भर्खरै आएका छन् । उनीहरु धेरै विदेशमै छन् । व्यवहार आफूले धाने पनि मनमा ढुक्क चाहिँ हुँदैन । मेरो छोरो बाहिर छ । बुहारी काठमाडौंमा बस्छिन् । उनलाई अहिलेसम्म मैले ठूलो स्वरमा गाली गरेको छैन । उनलाई नानी छोराले पठाएको पैसा सही ठाउँमा खर्च गर । जोगाउनु पनि पर्छ भनेर सम्झाउँछु । के के कुरामा खर्च गर्छौ त्यसको लेखाजोखा राख भन्छु । अनि मलाई पनि अलिकति पैसा तिम्रै हातले पठाइद...